विन्टर डिप्रेसन ! किन हुन्छ ? कसरी बच्ने ? - Sabal Post
१८ माघ २०७५, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं – सामाजिक र जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या, अशान्ति वा मनले चिताएको काम पूरा नभएको अवस्थामा मानिसको दिमागमा असर पर्नसक्छ । मानसिक रोग सबै एकै प्रकारको हुँदैन । डिप्रेसन मानसिक रोगको एक प्रकार हो । र डिप्रेसनभित्र पनि धेरै प्रकार हुन्छ । त्यसमध्ये विन्टर डिप्रेसन एक हो । विन्टर डिप्रेसन विशेषगरी चिसो मौसममा हुनेगर्छ । गर्मी मौसममा विन्टर डिप्रेसन हुँदैन । यसलाई सिजनल डिप्रेसन भनिन्छ भने मेडिकल भाषामा एफेक्टिभ डिसअर्डर पनि भनिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत मानसिक रोगी छन् । ४५ करोड मानिसमा मानसिक समस्या छ भने ३५ करोडमा डिप्रेसन छ । मानसिक रोगकै कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन् भने प्रत्येक दिन १२–१५ जनाले आत्महत्या गर्छन् । यीमध्ये ९० प्रतिशतले मानसिक रोगका कारण आत्महत्या गर्छन् ।
बन बिज्ञानका बिधार्थीहरुद्धारा रुद्रपुर सामुदायिक बनको अध्ययन
छापा मार्ने चर्चाले अमेरिकामा आप्रवासी त्रसितः चर्च…